Archive du 20180322
Propagandy Manomboka tonga ny elikoptera
Niely ny resaka sy feo momba ny hoe fahitana angidim-by na “helicopère” mampiahiahy tany Ambatosenegaly, any amin’ny 30 km eo aorian’i Moramanga raha avy any Toamasina noho ny fihotsahan’ny tany ny alin’ny talata 20 martsa teo, nentina tamina kamio lava be iray niara-nihitsoka tamin’ny fiara rehetra.
Diplaomasia Nangoron’entana ny masoivoho Amerikanina
Hatairana ny nandrenesana fa handao an’i Madagasikara tsy ho ela ny Masoivoho Amerikanina Robert Yamate.
Antenimieram-pirenena Lalàna 5 tamin’ireo 12 tonga no nolanian’ireo depiote
Tao anatin’ny lanonana tsotra nanaovan’ny filohany Jean Max Rakotomandimby kabary fohy dia fohy omaly alarobia 21 martsa no namaranana tamin’ny fomba ofisialy ny fivoriana tsy ara-potoana faha-2 an’ity andrim-panjakana ity tamin’ity taona 2018 ity ka nanambarany
Ahiahy momba ny masoivoho Frantsay Nanazava ny lehiben’ny Antenimieram-pirenena
Nampiahiahy ny fisian’ny fiaran’ny masoivoho frantsay Véronique Vouland teny amin’ny Antenimieram-pirenena Tsimbazaza ny talata tolakandro teo nisian’ny raharaha mafana teny an-toerana momba ny resaka lalàm-pifidianana.
TIM, MAPAR, HVM Fanina ny sarambabem-bahoaka
Valalanina ny olom-pirenena eo anatrehan’ny zava-misy eo amin’ny sehatra politika. Gidragidra ny eny anivon’ny antenimieram-pirenena, saingy toa afaka mifandamina ihany ireo heverina ho mpifahavalo politika, toy ny TIM sy ny MAPAR, eny fa hatramin’ny HVM aza.
Depiote Randrianasolo Dera Nanatrika ny famaranana ny fivoriana tsy ara-potoana faha-2
Iray amin’ireo depiote Mapar 3 niaraka tamin’ny depioten’Ikongo, Razafintsiandraofa Brunel sy ny depioten’i Toamasina 2,
Fanomezana vola depiote teny Tsimbazaza Manalabaraka ny vahoaka nifidy anay izany, hoy ny depiote Ludovic
Matoa nangataka fanemorana ny fandaniana an’ireo volavolan-dalàna fehizoro 3 mikasika ny fifidianana ho amin’ny fivoriana tsy ara-potoana faha-3 amin’ity 2018 ity izahay,
Lalàna fehizorom-pifidianana 2018 Feno fanilikiliana hoy ny depiote Rasoanoromalala Horace
Nakarina tao amin’ny fivoriana nitambaramben’ny Antenimieram-pirenena teny Tsimbazaza ny talata 20 martsa teo ilay volavolan-dalàna fehizoro laharana 05/2018 mikasika ny lalàm-pifidiana hampiharina amin’ny taona 2018 ity.
Kolikoly avo lenta Minisitra teo aloha nidoboka am-ponja
Nidoboka am-ponja vonjimaika nanomboka omaly alarobia 21 martsa hariva ny minisitra teo aloha tamin’ny andron’ny praiminisitra Kolo Roger, izay nitazona ny minisiteran’ny vola sy ny tetibola Razafindravonona Jean, taorian’ny fakana am-bavany azy teny amin’ny fitsarana manokana misahana ny ady amin’ny kolikoly teny 67 Ha, omaly.
Loza ateraky ny andro ratsy Hitadiavam-bahaolana ny hampihena azy
Hankalazaina ny 23 martsa ho avy izao ny andro maneran-tany ho an’ny toetr’andro.
Tanànan’i Mahajanga Nahazo toerana vaovao fakana sary
Nahazo toerana vaovao fakana sary miaraka amin’ny fiaramanidina tena izy eo ampitan’ny sekoly Notre Dame Mangarivotra ny tanànan’i Mahajanga.
Otisma An-jatony ny ankizy voany eto Madagasikara
Homarihina ny 02 aprily ho avy izao indray ny andro maneran-tany ho an’ny fampahafantarana ny ôtisma na ilay karazana toe-batana iray mpahazo ny ankizy maro eto amintsika.
Seranan-tsambon’i Toamasina Kaontenera 1500 mihitsoka
Nalaza tato ho ato fa misy kaontenera miisa 1500 voageja ao amin’ny seranan-tsambon’i Toamasina. Tsy fantatra mazava moa izay tena entana ao anatin’ireto kaontenera ireto.
Fitsaram-bahoaka mirongatra Tandindon’ny ady an-trano
Mamparikoditra sy maharikoriko ny olona manana fo mitempo sy manome hasina ny aina ny zava-nitranga tany Antsohihy niely tamin’ny tambajotran-tserasera ny talata teo. Tsy vitan’ny mirongatra fotsiny intsony ny fitsaram-bahoaka fa efa tena miha “mankafy” izany ireo mponina.
Nirava ady sahala 0 – 0 ny Barea an’i Madagascar sy ny Eperviers an’i Togo nandritra ny lalao ara-pirahalahiana tany Saint-Leu La foret, Frantsa omaly .Hita ho nanindry ihany ny Malagasy indrindra fa tany amin’ny faramparan’ny fizaram-potoana faharoa saingy tsy nisy moa ny baolina maty .Hifanandrina amin’ny ekipam-pirenen’i Kosovo indray ny 24 martsa izao mbola any Frantsa ihany ny Barea.
Notokanana omaly tetsy Cite Ambatonankanga ny ivontoeran`ny firaisamonimpirenena fanarahana maso ny fizotry ny fifidianana(FANOA) sy hiadiana amin`ny kolikoly mahakasika ny fifidianana (FANDIO).
Ry zareo avy eo anivon’ilay sampan-draharaha manokana iarahan’ny fiarahamonim-pirenena sy ny vondrona eoropeanina miasa eto amintsika hikatsahana fifidianana mirindra lavitry ny korontana na ny ECES dia hampahafantatra etsy amin’ny Colbert Antaninarenina ny paikadin-drizareo
Facebook Tratran’ny fanadihadiana indray
Tsy maintsy hanazava manoloana ny vaomiera manokan’ny parlemanta Anglisy sy Eoropeanina indray ato ho ato i Mark Zuckerberg mpanorina sady tompon’ny facebook.
Fandovana sy didim-pananana Tokony hokarakaraina ao anatin’ny enim-bolana
Harena manan-danja ho an’ny Malagasy ny tany honenany ary andry iankinan’ny fiainany sy ny taranany izany kanefa malaina ny hanoratra ny taniny noho ireo olana hafa sedraina na sakantsakana ara-panjakana.